Fitaovana alika - Mundo Perros | Tontolo alika (Pejy 2)
Ny tsihy fofona dia tena ilaina hampitony ny alikanao amin'ny alalan'ny fanatanjahan-tena ara-tsaina. Manoro ny tsara indrindra izahay!
Ny tsihy mamelombelona ho an'ny alika dia iray amin'ireo tolo-kevitra hanampiana ny biby fiompintsika handalo ny hafanana araka izay tratrany. Vakio!
Ny seza misy kodiarana alika dia mamela ireo biby ireo hivezivezy mora kokoa, zavatra tsy voavidy vidiny. Vakio ary jereo!
Ny borosy alika dia fitaovana tena ilaina amin'ny fitazonana ny akanjon'ny alikanao ho salama sy mamirapiratra. Miresaka momba izany eto ambany izahay!
Afaka manatsara ny kalitaon'ny fiainan'ny alika ny diapers alika, mila mitady izay mety aminao fotsiny ianao. Jereo eto!
Ny kapaoty alika dia miaro amin'ny hatsiaka, ny orana ary ny lanezy, ary miavaka amin'ny palitao satria mifatotra eo anoloana.
Ho hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny satroka alika tsara tarehy, mafana ary mangatsiaka mba hiarovana azy ireo amin'ny hatsiaka sy ny hafanana. Vakio ary jereo!
Ny cones ho an'ny alika dia tena ilaina mba tsy handrovitra teboka na hilelaka ny feriny ny biby fiompintsika. Hitantsika ato amin'ity lahatsoratra ity!
Te hisoroka ny alikanao tsy hiditra na hiala amin'ny faritra ao an-trano ve ianao? Amin'ireny sakana ireny ho an'ny alika dia ho azonao tsy misy visy ary mora be izany!
Ny chip ho an'ny alika dia ampirisihina mafy indrindra mba ho afaka hamerina ny alikanao raha very izany ary ao amin'ny firaketana ny biby. Hitanay izy ireo anio!
Raha manana alika zokinjokiny ianao na karazan-java-maniry manana olana amin'ny valahana na amin'ny lohalika dia hanampy betsaka ireo tohatra ireo. Iza no hisafidy?
Mpihinana alika: lazainay anao ny zavatra rehetra
Anio dia manolotra anao ny mpamatsy alika tsara indrindra izahay ary mampianatra anao ny karazany sy ny fomba hisafidianana azy ireo, ankoatry ny maro hafa.
Mitady mpiaro seza fiara alika? Lazainay aminao hoe iza no maodely tsara indrindra, ny tombony, ny karazany ary maro hafa!
Mila mampiofana ny alikanao ve ianao? Jereo ny tadin'ny fiofanana tsara indrindra sy ny fomba fampiasana azy ireo tsara mba hankatoavan'ny biby fiompinao
Mitady tavoahangy rano alika? Sakano ny alika tsy mangetaheta mandritra ny diany miaraka amin'ireo maodely voatondro 100%.
Raha mieritreritra ny hividy fandriana atsangana ho an'ny alika ianao dia holazainay aminao izay rehetra ilainao. Avy amin'ny karazany ka hatramin'ny tombony ary maro hafa.
Fa maninona ny clicker no tsy maintsy mividy fampiofanana alika? Jereo hoe inona avy ireo karazana sy ny fomba fampiasana azy tsara.
Baiboly ho an'ny alika: ho an'ny tsiro rehetra
Bibs alika dia iray amin'ireo fototra hitondranao ny alikanao handeha an-tongotra soa aman-tsara. Androany dia miresaka momba azy ireo isika!
Misy olana ve ny manala ny fofon'ny mimi alika? Avelanay anao ny fanafody ao an-trano sy ny vokatra mahomby 100% hanalana ny fofona. Jereo izy ireo!
Mitady mpizara rano ho an'ny alikanao? Jereo ny maodely tsara indrindra mba hisy rano foana ny biby fiompinao.
Mino izany na tsia, ny tranom-borona alika dia manome tombony be antsika ary ho tonga toerana azo antoka anao izany. Inona no tranom-borona hovidiana ho an'ny alikanao?
Ny shampoo ho an'ny alika dia natokana manokana ho an'ireo biby ireo sy ny hodiny marefo mba hitazomana azy ireo hadio. Androany no ahitantsika ny tsara indrindra!
Mampiasà zaza amin'ny alika ve ianao? Fahadisoana lehibe! Fantaro ny antony tsy tokony hanaovanao azy io ary inona no famafana lena tsara indrindra ho an'ny alika
Raha te-hihary ianao nefa mahazo ny kitapo mahazaka indrindra ho an'ny alikam-alika dia manampy anao izahay. Inona no mora indrindra?
Ianao ve mila voanjo mamirapiratra ho an'ny alika? Eto ianao dia afaka mahita ny maodely tsara indrindra sy ny fampahalalana rehetra ilainao momba ity fitaovana ity.
Fantatrao ve ny tombontsoa rehetra avy amin'ny fitsakoana alika? Lazainay aminao ny tombony, ny karazana teethers ary izay rehetra tokony ho fantatrao.
Clipera hoho ho an'ny alika
Ianao ve mitady clipper amin'ny fantsika alika izay mahatonga ity asa ity ho tsotra, haingana ary tsy misy fanaintainana? Diniho kely ilay torolalana ananantsika.
Mila mitondra ilay alika ao anaty fiara ve ianao ary tsy hainao ny fomba? Fantaro ny fomba hitondrana azy soa aman-tsara ary hisorohana ny sazy noho ny tsy fanaovany tsara
Fantatrao ve ny zavatra rehetra mety hataon'ny alika alika ho an'ny biby fiompinao? Jereo ny tombony lehibe, modely tsara indrindra ary ny antony ilainao azy.
Manana alika ao an-trano ve ianao ka mandany volo be loatra? Avy eo ianao dia mila mahita ny manala volo tsara indrindra hanalana azy ireo amin'ny mora.
Akanjo ho an'ny alika kely: palitao mafana sy akanjo ba
Ny akanjo ho an'ny alika kely dia tena ilaina tokoa rehefa mangatsiaka, satria tsy arovana toy ny karazany hafa amin'ny hatsiaka izy ireo.
Ianao ve mitady harikotika kanika? Lazainay aminao ny fomba hisafidianana azy tsara ary asehonay anao ny tsara indrindra eny an-tsena mba hahafahanao misafidy
Ampahafantarinay ny fampahalalana rehetra ilainao ho fantatra momba ny tadin-tànana, fitaovana ho an'ny canicross na ampiasaina isan'andro.
Mieritreritra ny hividy harness Julius K9 ho an'ny alikanao ve ianao? Lazainay aminao izay tokony ho fantatrao hisafidy sy ny toerana ahafahanao mividy azy io mora kokoa
Amin'ity lahatsoratra ity dia nifantina antiparasites tsara indrindra ho an'ny alika izahay mba hahitanao izay mifanentana indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Furminator no borosy izay hanova ny fiainanao. Jereo ny tombony, ny zavatra rehetra azony atao ho anao sy ny biby fiompinao. Ho tianao izany!
Taolana tsara indrindra ho an'ny alika
Taolana inona no azonao omena ny alikanao? Inona avy no soa entin'ny kilalao sy tsakitsaky ny nifinao? Raha taolana alika no tadiavinao dia eto izy ireo
Ny tady tsara indrindra ho an'ny alika
Atorinay anao hoe iza no kamboty alika tsara indrindra azonao vidiana ho an'ny biby fiompinao. Inona avy ireo karazana ary iza no mety aminao?
Raha mitady kidoro ho an'ny alika lehibe ianao amin'ity safidy ity dia manana zavatra betsaka ho anao izahay, ary koa toro-hevitra hisafidianana ny tsara indrindra. Vakio sy jereo!
Ny kilalao 6 tsara indrindra ho an'ny alika isan-karazany
Raha manontany tena ianao hoe aiza no ahafahanao mividy kilalao tsara indrindra ho an'ny alika, dia nanomana safidy tsara ho anao izahay. Fantaro!
Ny alika alika tsara indrindra: torolàlana fampitahana sy fividianana
Raha manontany tena ianao hoe iza no kojakoja tsara indrindra ho an'ny alika, dia miomàna hahita ity safidinao ity miaraka amin'ireo izay milay indrindra. Vakio hatrany dia ho hitanao!
Ny sarety 6 tsara indrindra ho an'ny alika
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana fisafidianana kalesy tsara indrindra ho an'ny alika izahay mba hahafahanao misafidy izay tianao indrindra. Vakio!
Ny takelaka tsara indrindra hamantarana ny alikao
Raha te hahita ireo takelaka tsara indrindra hamantarana ny alikao ianao, dia nanomana safidy tsara ho anao izahay. Vakio mba hahitanao azy ireo!
Ireo mpandroaka rano mandeha ho azy 5 tsara indrindra ho an'ny alika
Amin'ity fisafidianana ireo mpamily rano mandeha ho azy tsara indrindra ho an'ny alika ity dia hahita vokatra ho an'ny tsiro rehetra ianao. Vakio sy jereo!
Ny dobo 6 tsara indrindra ho an'ny alika
Raha te hahita ny dobo alika tsara indrindra ianao hahafahan'ny alikao amin'ity fahavaratra ity dia nanomana safidy tsara izahay. Vakio!
Kennels 6 tsara indrindra ho an'ny alika
Raha mitady kennel ivelany ho an'ny alika ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana safidy tsara indrindra izahay. Vakio hatrany dia ho hitanao!
Ny varavarana 5 tsara indrindra ho an'ny alika
Amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana fisafidianana varavarana tsara indrindra ho an'ny alika ho hitanao amin'ny Amazon izahay. Vakio mba hahitanao azy ireo!
Ny mpikapa volo tsara indrindra ho an'ny alika
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny mikopakopaka tsara indrindra ho an'ny alika ary ho hitantsika ihany koa ny antony tsy azo aharatra ny alika sasany. Vakio sy jereo!
Parks alika tsara indrindra
Raha te hahafantatra ireo vala tsara indrindra an'ny alika ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana safidy ho anao izahay. Vakio hatrany dia jereo hoe firy izy!
Ireo tagan'ny alika manokana
Raha te hahafantatra ireo tag alika manokana ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana safidy izahay. Vakio hatrany dia ho hitanao!
Ireo mpitatitra tsara indrindra ho an'ny alika lehibe
Raha te hisafidy mpitatitra alika lehibe ilaina mifanaraka amin'ny filanao ianao dia nanomana safidy ho anao izahay. Jereo ka jereo!
Raha mieritreritra ny hividy trano alika ho an'ny biby fiompinao ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka trano fito tena tsara isika. Vakio hatrany dia ho hitanao!
Raha mieritreritra ny hividy fandriana ho an'ny alika lehibe ianao satria mihoatra ny alika dia manana soavaly ianao, dia nanomana safidy ho anao izahay!
Amin'ity torolàlana feno ho an'ny alika alika ity dia ho afaka ny hahita sy mampitaha harnesses maro samihafa arak'izay ilainao. Vakio sy jereo!
Ny pipe antiparasite dia tavoahangy kely misy ranoka mavitrika ao anatiny, fa tianao ho fantatra ve hoe inona izany?
Mety amin'ny alikantsika ve ny vozon'akanjoko manohitra hodi-kazo?
Manana alika mivovo be ve ianao ary liana hahafantatra raha toro-marika anti-hodi-kazo? Midira ary fantaro amin'ny fitsidihana an'ity lahatsoratra ity!
Jereo ny antiparasite mahery
Izahay dia manome anao ny torolàlana sy fampahalalana rehetra ilaina amin'ny fampiasana ny fiarovana mafy antiparasitika amin'ny alika na saka.
Vetriderm ho an'ny alika
Jereo hoe inona ilay fanafody antsoina hoe Vetriderm, inona izy io ary amin'ny toe-javatra manao ahoana no azo ampiasaina hanatsarana ny fahasalaman'ny alika. Jereo !!
Ny rehetra momba ny rojo Scalibor
Jereo hoe inona ny vozon'akanjoko Scalibor, inona izany ary amin'ny toe-javatra manao ahoana no azo ampiasaina hanatsarana sy hiarovana ny fahasalaman'ny alika. Jereo izany!
GPS ho an'ny alika
Raha mila GPS hahafantaran'ny alikao ny misy azy amin'ny fotoana rehetra ianao ary tianao ny toerana misy azy tsara indrindra dia tadiavo ny fomba fanaovana izany amin'ny alàlan'ity torolàlana ity.
Raha mila voanjo ianao handehanan'ny alikao any ivelany ary tsy mila afa-tsy ny vozon'akanjo tsara indrindra ianao dia tadiavo ny fomba fanaovana izany amin'ny alàlan'ity torolàlana ity.
Ny kitapom-batsy alika dia mamela anay hitatitra biby fiompy madinidinika amin'ny fomba azo antoka sy azo antoka, raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia hanampy anao ity torolàlana ity.
Dobo ho an'ny alika
Raha tianao ny hahita alika mahafinaritra, miaraka amin'ny zanakao, dia tsara kokoa ny mividy dobo ho an'ny biby fiompy. Topazo maso ity toro-lalana ity.
Ho avy ny Halloween ary azo antoka fa hiaraka amiko ianao fa tsy misy mahafinaritra kokoa noho ny mitafy ny alikanao, sa tsy izany? Ampidiro ary fantaro ny akanjo tsara indrindra.
Te hanana ny alikanao amin'ny fotoana rehetra ve ianao? Raha matahotra ny tsy hahita ny biby fiompinao ianao dia jereo ny zavatra lazainay aminao amin'ity toro-lalana ity.
Mila mividy vitamina ho an'ny alika ve ianao mba hamatsiana karazana tsy fahampiana? Mora dia mora izany, jereo ity torolàlana ity ary tadiavo ireo vitamina tsara indrindra.
Mpitondra alika azo aforitra
Mila mividy mpitatitra alika mivalona ve ianao izay mahatsapa mahazo aina sy tsy manana ahiahy? Topazo maso ity torolàlana ity dia tadiavo ny anao.
Mila mividy kiraro ho an'ny alika ve ianao amin'izay ahitan'izy ireo aina sy azo antoka? Mora be izany, jereo ity torolàlana ity ary tadiavo ny baoty tsara indrindra.
Mpitondra alika, inona no tokony ho fantatrao
Fantaro ny zava-drehetra momba ny mpitondra alika, kojakoja ilaina mba hifindra miaraka amin'ilay alika ankehitriny.
Rahoviana no tokony hasiana mu mux amin'ny alika?
Jereo hoe rahoviana ianao no tokony hasiam-bava amin'ny alika mba hisorohana ny olana amin'ny fotoana fohy na antonony. Ho fanampin'izay, lazainay aminao ireo karazana misy mba hahafahanao misafidy izay mety indrindra.
Fitaovam-piadiana fanoherana ny fitsangatsanganana amin'ny alika
Ny harness anti-pull dia sombin-javatra vaovao izay manampy ny alika hijanona tsy hisarika rehefa mandeha miaraka aminy isika. Jereo ny antsipiriany rehetra momba an'io akanjo vaovao io.
Araka ny efa fantatsika, ny alika tsirairay dia samy hafa ary toy izany, samy hafa ny vozon'akanjo tsirairay tsy maintsy anaovany. Fantaro izay vozon'akanjo ampiasaina amin'ny alikanao.
Tsara ve ny mitafy ny alika?
Tsara ve ny mitafy ny alika? Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita toro-hevitra maromaro ianao izay hanampy anao hahafantatra raha tena tokony hitafy akanjo na tsia. Raha te hahita biby miakanjo akanjo ianao dia aza adino ireo alika modely ireo.
Efa nandre momba ny fiofanana fampiofanana alika ve ianao fa mazava tsara ny amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny alikao? Midira ary fantaro.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny fandriana idealy ho an'ny alikanao
Ny fisafidianana ny fandriana idealy ho an'ny alikanao dia mety ho toa tsotra, fa ny marina dia misy safidy maro azo eny an-tsena.
Lalao homemade ho an'ny alika amin'ny andro orana
Mitadiava kilalao alika an-trano mahaliana izay azo atao mandritra ny andro manorana mba hampifaliana azy ireo ao an-trano.
Fanomezana ho an'ny alika mandritra ny Noely
Anisan'ny fianakaviana ny biby fiompinay, ka noho izany dia tsy maintsy ampidirinay amin'ny fanomezana Krismasy koa izy ireo. Fa…
Ny alikanay koa dia mianatra amin'ny alàlan'ny lalao isan'andro, noho izany dia zava-dehibe ny fisafidianana tsara ireo kilalao hampiala voly azy ireo.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny vozon'alika alika
Manontany tena ve ianao ny amin'ny fomba hanamboarana ny vozon'alika alika? Raha efa antitra izy na te-hanamboatra azy dia aza misalasala miditra.
Maninona no mila shampooing alika maina
Raha hikarakara ny palitaon'ny alika dia manana safidy mahaliana isika, toy ny shampooing alika maina, izay manadio ny volony mora foana.
Palitao alika, na hanohitra
Ny palitao alika dia mety manana tanjona kanto fa manana ny asany koa izy ireo amin'ny fiarovana ny biby fiompintsika.
Fanangonana Ikea Lurvig ho an'ny biby fiompinao
Ikea dia manolotra ny fanangonana voalohany ho an'ny biby fiompy, Lurvig, fanangonana feno kojakoja ho an'ny volom-borona hankafizany ny trano.
Olana mety hiteraka ny vozon'alika
Rehefa hisafidy ny vozon'akanjo na harness ho an'ny alika isika dia tsy maintsy mitandrina zavatra sasany ao an-tsaina ary ambonin'izay rehetra mahalala fa miteraka olana ilay vozon'akanjo.
Sudoku ho an'ny alika
Ny kilalao ifandrimbonana ho an'ny biby fiompy dia mitovy amin'ny lalao fahalalana toy ny Tetris, Sudokus na Puzzles.
Kilalao an-trano ho an'ny alika
Fantaro ny fomba fanaovana kilalao an-trano ho an'ny alika miaraka amin'ny fitaovana sasany izay ananantsika rehetra ao an-trano, hevitra tena ara-toekarena.
Tombony azo amin'ny kilalao alika
Ny kilalao alika dia mety ho fialamboly tsara ho an'ireo volony ao an-trano, ary manampy azy ireo amin'ny fomba hafa koa izy ireo.
Kyon Pet Tracker, vozona maranitra ho an'ny alika
Kyon Pet Tracker dia vozon'akanjo alika teknolojia avo lenta ho an'ny alika, izay amin'ny alàlan'ny sensor-ny no manondro ny toetry ny saina sy ny filan'ny biby.
Ahoana ny fisafidianana ny mpitatitra mety indrindra amin'ny alikanao
Ny mpitatitra alika dia fitaovana ilaina tokoa hitondrana azy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa, ary tsy maintsy manana ny toetra mampiavaka azy izy io.
Ireo mpamahana alika mandeha ho azy dia mety ho hevitra tsara raha mandany fotoana lavitra ny trano isika, na dia misy drawbacks aza.
Te hahafantatra ny fomba hisafidianana ny vozon'akanjo tsara indrindra ho an'ny alikako ianao? Lazainay aminao ireo karazana ho hitanao eny an-tsena sy ny toetrany.
Ahoana ny fomba fitafy ny alika amin'ny Halloween
Betsaka ny hevitra hampiakanjo ny alika amin'ny Halloween, na dia zava-dehibe aza ny tsy hahitan'izy ireo fa manelingelina azy ary mankafy azy koa izy ireo.
Mamorona GPS izy ireo mba hahitana ny alika amin'ny finday
Ity vozon'akanjoko ity dia manana ny GPS Dondo, fitaovana mamela ny alika hita miaraka amin'ny finday sy fampiharana maimaim-poana.
Rahoviana no hasiana vava alika
Manana alika mitebiteby ve ianao ary te hahafantatra hoe rahoviana no tokony hasiana vava alika? Raha eny dia midira raha te hahalala amin'ny toe-javatra mety tokony hapetrakao.
Manosotra ny alika, misafidy borosy mety
Ny fikosehana ny alika dia dingana iray izay tsy maintsy ataontsika farafahakeliny indroa isan-kerinandro, ary amin'ny borosy tsara voafidy tsara.
Palitao fanoherana adin-tsaina ho an'ny alika misy fanahiana misaraka
Ny palitao miady saina dia afaka manampy ny alika handresy ny fanahiana misaraka, na dia tsy izy ireo ihany no fomba hanatanterahana izany.
Akanjo ho an'ny alika amin'ny fararano
Ny akanjo ho an'ny alika amin'ny fararano dia tena ilaina indraindray, hiarovana azy ireo tsy amin'ny hatsiaka ihany fa amin'ny orana koa.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny tadiny mety amin'ny alikao
Ny fisafidianana ny leash mety ho an'ny alikantsika dia tsy mora foana, satria miankina amin'ny toetra amam-panahy maro, toy ny toetra na ny haben'ny alika.
Ahoana ny fomba hisafidianana kilalao ho an'ny alikanao
Tsy azonao antoka ny fomba hisafidianana kilalao ho an'ny alika? Midira fa hanampy anao izahay. Jereo hoe iza no tokony hovidinao handanianao fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namanao.
Rafitra GPS ho an'ny alika
Garmin dia namorona vozon'akanjoko GPS mba hahafahan'ny alika 20 manara-maso sy fehezina amin'ny faritra 14 kilometatra.
Kola voadika mandika izay tsapan'ny alika
Jereo ny vozon'akanjo mahatalanjona mandika izay tsapan'ny alika. Inupathy dia fanavaozana iray izay mampiseho amintsika ny fihetsem-pon'ny alika.
Ahoana ny fomba fanadiovana ny vavan'ny alika
Fandriana alika mpamorona vaovao
Jereo ny maodely vaovao an'ny fandriana alika mpamorona, miaraka amin'ny hevitra amin'ny fomba sy fitaovana samihafa hankafizana.
Ahoana ny fomba hisafidianana fehikibo ho an'ny alikako
Manana volom-borona vaovao ve ianao ary manontany tena hoe ahoana no hisafidianana ny tadin'ny alikako? Midira ary holazainay aminao ny karazany misy ary iza no tsara indrindra ho an'ny volonao.
Fantaro ny fomba fanosehana ny alika amin'ny fomba tsotra indrindra, ataovy fahazarana ny manao azy ho dingana mora ho an'ny rehetra.
Fitaovana fikolokoloana canine tena ilaina
Tsy maintsy manana kojakojam-pandriana fikorontanana an-trano ao an-trano ianao mba hikarakarana ny fahadiovan'ny alika isan'andro, satria mifandray amin'ny fahasalamany izany.
Fandriana lafo vidy ho an'ny alika
Na dia toa be loatra aza izany ho an'ny maro amintsika, satria tsy mahazaka rendrarendra isika dia misy ireo izay manana ny biby fiompy amin'ny karazan-java-maniry sy eritreritra rehetra. Izany no antony
Milalao frisbee amin'ilay alika
Efa imbetsaka isika no nahita ny lalao Frisbee na ilay kapila niaraka tamin'ny alika. Toa fanatanjahan-tena tena mahafinaritra izany, izay ...
Dingana kely fotsiny ny karnaval, ary tokony hankafy an'io fotoana mahafinaritra io koa ny alikanay. Androany…
Mampiseho hevitra vitsivitsy aminao izahay hahazoana am-pandriana alika vita amin'ny paleta. Sombiny tsara ho an'ny alika hanana ny habaka manokana.
Mamorona ranomanitra namboarina ho an'ny alika
Lazainay aminao ny fomba fanamboarana menaka manitra ho an'ny biby fiompy. Hevitra mahatalanjona mamorona fifangaroana voajanahary izay manitra tsara ary mikarakara tsara ny alika.
Ny maha-zava-dehibe ny alikanao manana ny fandriany manokana
Lahatsoratra izay hiresahantsika ny maha-zava-dehibe ny alikanao manana ny fandriany ary koa matory ao aminy hatramin'ny andro voalohany.
Karazan'alika ho an'ny alika
Ny caravans alika no safidy voalohany indrindra amin'ireo kennels angano.
DIY: fandriana alika avy amin'ny akanjo ba
Fantaro ny fomba fanaovana fandriana alika DIY amin'ny akanjo ba taloha.
Jereo ny feeder tany am-boalohany
Eny an-tsena dia afaka mahita maodely mahaliana maro amin'ny feeders alika ianao. Asehonay anao ny sasany amin'ireo tena tany am-boalohany.
Akanjo ho an'ny alika: modely ho an'ny ririnina
Mety ho henjana amin'ny biby ny fahalavoana sy ny ririnina, amin'izay ianao afaka mividy akanjo ho an'ny alika, mba tsy hatsiaka izy ireo.
Carolina Herrera dia mandefa fanangonana Dog vaovao
Ny mpamorona Carolina Herrera dia manolotra ny fanangonana Dog vaovao ho an'ny taona 2013, miaraka amin'ny karazana lahatsoratra rehetra ho an'ny biby fiompinay.
Collars na biby amin'ny alika kely
Manoro hevitra anao izahay fa mety tsara ho an'ny alika kely izany, matihanina maro no mihevitra fa tokony hanao vozon'akanjo ianao, satria mora esorina ireo bib.
Kilalao fanaovana firaisana amin'ny alika
Elo ho an'ny alika
Ny kojakoja tsara indrindra ho an'ny alika
Mpandeha tongotra handeha amin'ny alikanao
Fandriana alika hafanaina
Fimailo ho an'ny alika
Ramp ho an'ny dobo sy ny alikanao
Mety hitranga izany noho ny antony maro hafa ny alikantsika dia mila manao «coco».
Ny spa dia zava-baovao ary ankatoavin'ny tompon'ny alika, miditra amin'ny sehatry ny hatsarana sy ny taovolo ireo zava-baovao ireo
Manao ny vozon'akanjo Elizabethan
Amin'ny fotoana samihafa dia tsy maintsy mitafy ny vozon'akanjo Elizabethan ny alikanao.